မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကို လက်ကမချနိုင်ဖြစ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ - Hello Sayarwon
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကို လက်ကမချနိုင်ဖြစ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ
Ye Zon Aung မှ ရေးသားသည်။ 05/02/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
မနက်မိုးလင်းတာနဲ ကောက်ကိုင်မိတာက မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြစ်နေပြီး ညအိပ်ချိန်မှာ နောက်ဆုံးထိတွေ့ခဲ့တာကလည်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြစ်နေပြီလား။ ဘယ်အချိန်မဆို ဖုန်းကို တကိုင်ကိုင်နဲ့ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဒါက မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကို နှစ်သက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ စွဲလမ်းတဲ့အဆင့်ကို ရောက်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခုလို Work from Home ၊ Stay at Home အစီအစဉ်တွေနဲ့ နေအိမ်တွေမှာနေထိုင်နေရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးမှာဆိုရင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြုတဲ့အချိန်ပမာဏက ပိုမြင့်တက်လာသလို ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ အချိန်ဖြုန်းတဲ့နှုန်းကလည်း ပိုများလာနေပါတယ်။
ပျင်းလို့၊ စိတ်ပျော်ရွှင်ချင်လို့ ဖုန်းကိုပိုသုံးမိပြီး ဖုန်းပိုသုံးမိတော့ ပိုပြီးလက်က မချနိုင်ဖြစ်ရင်း သံသရာလည်နေတယ်ဆိုပါတော့။
ဒီလိုအခြေအနေတွေတင်မကပါဘူး အောက်ပါလက္ခဏာတွေသင့်မှာ ရှိနေပြီဆိုရင် သာမန်စွဲလမ်းမှုမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဖုန်းနဲ့ မကင်းကွာအောင် တမင်ဂရုစိုက်နေထိုင်တာ၊
ဖုန်းမရှိရင် စိတ်တို ဒေါသထွက်နေတတ်တာ၊
ကိစ္စအားလုံးကို ဖုန်းနဲ့ ဆက်စပ်တွေးခေါ် ပြုမူနေတတ်တာ၊
နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အာရုံစိုက်မှုလျော့ကျလာတာ၊
လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာ အားနည်းချက်တွေ သိသာထင်ရှားစွာ ကျဆင်းလာတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ သင့်မှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒီလို ကျန်းမာရေးပြဿနာကို Nomophobia လို့ခေါ်ပြီး စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Nomophobia ဝေဒနာ စွဲကပ်လာပြီဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်ပြီးမြောက်မှုလျော့နည်းတာ၊ အခွင့်အရေးတွေကို မျက်ကွယ်ပြုတာတွေလည်း ပိုများတတ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး Nomophobia ဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ၄၀% ဟာ ပညာရေးမှာ အဆင့်ကောင်းကောင်းမဝင်ကြဘူးလို့လည်း လေ့လာချက်တွေကဆိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ဖုန်းကို လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးနဲ့ ချိန်ထိုးစဉ်းစားလာတာမျိုးတွေ မြင့်တက်လာတတ်ပြီး Pre-existing anxiety လိုဝေဒနာတွေလည်း ခံစားလာရနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီကနေ့ခေတ် ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ စိတ်ဝေဒနာတစ်ချို့ ရှိနေပါတယ်။ ဥပမာ – Claustrophobia (အလုံပိတ်အခန်းတွေကိုကြောက်တတ်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာ) ၊ Ergophobia (အလုပ်လုပ်ရမှာကြောက်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာ) ၊ Didaskalenophobia (ကျောင်းသွားရမှာ၊ ပညာသင်ရမှာကြောက်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာ) စသဖြင့် ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့။
Nomophobia လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာတစ်မျိုးကတော့ ကိုယ်လက်ထဲမှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှကိုင်ထားနေရတဲ့ ဖုန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာပါ။Nomophobia ဆိုတာက no–mobile-phone phobia ကို အတိုကောက်ရေးထားတာပါ။ ဒီရောဂါကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ တရားဝင်ရောဂါတစ်မျိုးအဖြစ် စတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဖုန်းဟန်းသွားချိန်၊ ဘက်ထရီကုန်သွားချိန်၊ လိုင်းမမိချိန်၊ စိတ်တိုတာ၊ သောကရောက်တာ၊ စိတ်မရှည်နိုင်တာ၊ စိတ်ဖိစီးတာမျိုးတွေ ဖြစ်ဖူးပါလား? ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းကိုယ့်နားမှာမရှိရင် တစ်ခုခုလိုနေတာလိုလို၊ ဖုန်းမသုံးရရင် စိတ်ထဲ ကနာမငြိမ်ဖြစ်နေတာလို ခံစားချက်မျိုးတွေရော ခံစားနေရပြီလား? ဒါဆိုရင် ကိုယ့်မှာ Nomophobia ရှိနေပြီလား မဖြစ်မနေ ပြန်သုံးသပ်ရပါတော့မယ်။
Nomophobia ဟာ ဒီကနေ့ခေတ်မှာ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ကာယကံရှင်အများစုဟာ ဝေဒနာခံစားနေရမှန်း မသိရှိကြတာများပါတယ်။ ဒီဝေဒနာဟာ ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး နှလုံးကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ပိုလို့တောင်လူသိနည်းပါသေးတယ်။
Nomophobia ရဲ့ တကယ့် မျိုးစိတ်က Anxiety Disorder လား? Lifestyle Disorder လား? စွဲလမ်းစိတ်လားဆိုတာကိုတော့ ဒီကနေ့အချိန်အထိ စိတ်ပညာရှင်တွေအကြား အငြင်းပွားနေကြဆဲပါ။
Nomophobia သမားတွေဟာ အဆင့်တစ်ခုကို ရောက်လာပြီဆိုရင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကိုပါ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ခံစားလာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါ ဝေဒနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်တာ (သို့) ထိုင်းမှိုင်းတာ၊
အထူးသဖြင့် ဖုန်းမသုံးရချိန်၊ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းသုံးရအဆင်မပြေချိန်တွေမှာ ဒီလိုဝေဒနာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
Nomophobia ဟာ ဒီကေန့ခေတ် လူတြေအကြားမွာ မသိမသာနဲ့ ကျယ်ပြန့်စွာ တွယ်ညိနေတဲ့ ဝေဒနာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကဆိုရင် ကပ်ဘေးလို့တောင် ဆိုကြပါတယ်။လူတိုင်းနီးပါး စမတ်ဖုန်းတွေကို နေ့စဉ်လူနေမှုအသုံးအဆောင်တွေအဖြစ် အသုံးချနေကြတဲ့ဒီခေတ်မှာ ဒီသုံးသပ်ချက်က မှားယွင်းတယ်လို့ မဆိုသာပါဘူး။
လေ့လာချက်တွေအရလည်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသုံးစွဲသူအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ ဖုန်းတွေအပေါ် စွဲလမ်းစိတ် အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ရှိနေကြပါတယ်။ တစ်ချို့က Nomophobia အဆင့်အထိမရောက်သေးပေမယ့် ရောက်နိုင်ချေရှိနေပြီး တစ်ချို့ကတော့ မသိလိုက်ဘာသာနဲ့ကို စွဲလမ်းတဲ့အဆင့်ကို ရောက်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ဖုန်းတကြည့်ကြည့်၊ ကျောင်းမှာလည်း ဆဲလ်ဖီ တဆွဲဆွဲ၊ ရုံးမှာလည်း ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်လေးတ ပွတ်ပွတ်ဖြစ်နေပြီလား? အိပ်ယာဝင်ချိန်မှာတောင် ဖုန်းလေး ဘေးချပြီးမှ အိပ်နေပြီလား?
တကယ်လို့များ ကိုယ်က စမတ်ဖုန်းတွေကို လိုတာထက်ပိုပြီး စွဲလမ်းနေတယ်လို့ခံစားနေရပြီဆိုရင် သေချာပြန်စဉ်းစားပါ။ သာမန်ထက် ပိုစွဲလမ်းနေပြီလား၊ Nomophobia ရှိနေပြီလား ဆိုတာကိုပေါ့။ အစွဲအလမ်းဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ကောင်းကျိုးမပေးဘူးမဟုတ်လား။
စမတ်ဖုန်း အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ
စမတ်ဖုန်းတွေပေါ်မှာ တစ်လနီးပါး ရှင်သန်နိုင်တဲ့ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး
ခေတ်သစ် ဖုန်းရောဂါ (text neck)
ကျဉ်းကျပ်သောနေရာများကို ကြောက်သောရောဂါ ( Claustrophobia)